Smart Pet Feeder ထုတ်လုပ်သူများ - China Smart Pet Feeder Factory၊ ပေးသွင်းသူများ
▶အဓိကအင်္ဂါရပ်များ - Wi-Fi ဝေးလံခေါင်ဖျားသောထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စနစ် - Tuya APP စမတ်ဖုန်းတပ်ဆင်နိုင်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ - တိကျမှန်ကန်သောကျွေးမွေးမှု - တစ်နေ့လျှင် ၁-၂ စီး။ - အသံဖမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖွင့်ခြင်း - သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားသံကိုဖွင့်ပါ ...
Features အဓိကအင်္ဂါရပ်များ - • 2L စွမ်းရည် - သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ • Dual mode - SMART / NORMALSMART - ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ရေကိုစီးဆင်းစေခြင်း၊ ဆူညံသံနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချသည်။
Tuya Smart Pet Feeder - SPF2000-W-TY WiFi ဗားရှင်း
▶အဓိကအင်္ဂါရပ်များ - Wi-Fi အဝေးထိန်း - Tuya APP စမတ်ဖုန်းကိုတပ်ဆင်နိုင်သော။ - အလိုအလျောက်နှင့်အစာကျွေးခြင်း - ခင်းကျင်းပြသခြင်းနှင့်လက်စွဲထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ပရိုဂရမ်ရေးခြင်းအတွက်ခလုတ်များ။
Tuya Smart Pet Feeder Wi-Fi ဝေးလံခေါင်ဖျားကင်မရာနှင့် SPF2000-V-TY
▶အဓိကအင်္ဂါရပ်များ - Wi-Fi အဝေးထိန်း -Tuya APP စမတ်ဖုန်းကို programmable.- အလိုအလျောက်နှင့်လက်ဖြင့်အစာကျွေးခြင်း - ခင်းကျင်းပြသထားသည့်ခလုတ်များ - ပုံစံနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အစီအစဉ်တင်ခြင်း။
Features အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများ - Wi-Fi ဝေးလံခေါင်ဖျားထိန်းချုပ်မှု - Tuya APP စမတ်ဖုန်းကိုတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း။ - တိကျမှန်ကန်သောအစာကျွေးခြင်း - တစ်နေ့လျှင် ၁-၂၀ ကျွေးမွေးမှု၊ ၁ မှ ၁၅ ခကြားအထိခွဲဝေသုံးစွဲခြင်း။
Features အဓိကအင်္ဂါရပ်များ - အလိုအလျောက်နှင့်လက်ဖြင့်အစာကျွေးခြင်း - ခင်းကျင်းပြသခြင်းနှင့်လက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ပရိုဂရမ်ရေးခြင်းအတွက်ခလုတ်များ။ - တိကျမှန်ကန်သောအစာကျွေးခြင်း - တစ်နေ့လျှင် ၈ ခုအထိထည့်သွင်းခြင်း ။- အသံမှတ်တမ်းနှင့် ...
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်း Wi-Fi ဝေးလံခေါင်ဖျားသောကင်မရာ SPF2000-V နှင့်အတူ
Features အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများ - ဝေးလံခေါင်သီသောထိန်းချုပ်မှု - စမတ်ဖုန်းဖြင့် programmable. -HD ကင်မရာ - အချိန်နှင့်တပြေးညီအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု။ - Alert လုပ်ဆောင်ချက်များ - သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အသိပေးချက်ကိုလက်ခံပါ။ - ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု - နေ့စဉ်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မှတ်တမ်းများ ...